Candy Crush Level 829 Iingcebiso kunye namaqhinga - Umdlalo weCandy Crush - Free Lives Tips Cheats Hints
Umdlalo weCandy Crush - Free Lives Tips Cheats Hints
Ukukhohlisa iCandy Crush
Inqanaba 29 Nceda
Inqanaba 33 Nceda
Inqanaba 65 Nceda
Inkcazo yeCandy Crush
Dlala iCandy Crush kwi-PC
Kwamagumbi Tips for Candy Crush
Joyina Team yethu
You are here: Home / Uncategorized / Candy Crush Level 829 Iingcebiso kunye namaqhinga
Candy Crush Level 829 Iingcebiso kunye namaqhinga
Last updated on Isilimela 25, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Akukho nto iqinisekileyo emhlabeni. Indalo isoloko itshintsha. Yatshintsha ukusuka kwiminyaka yezihlunu ukuya kwiminyaka yobukrelekrele. Kwinkulungwane eyadlulayo, indoda enemisipha yayigqalwa yomelele kwaye inika umdla. Nangona kunjalo ngoku oyena mntu uxatyisiweyo ngoyena unamandla engqondo. Kungoko, ukuba ufuna ukuba kuluhlu luka-A lwehlabathi lanamhlanje kufuneka ube phezulu kumdlalo wakho ngamandla engqondo. Ngoko ke, indlela elungileyo yokwenza oko kukuzilolonga kwengqondo. Ngokuqinisekileyo, umthambo obalaseleyo nowonwabisayo unokuba yiCandy Crush!
Yiyo lonto, iqala njengomdlalo olula womdlalo, ukudibanisa iziqwenga ezifanayo, enokuthi wonke umntu akwazi ukuyidlala, kodwa eneneni, yomelele kakhulu kunokuba ikhangeleka. Njengoko siqhubela phambili kumdlalo, amanqanaba omdlalo ohamba phambili kumdlalo uba nzima ngakumbi. Ngaphandle kwale, ukufezekisa izinto kuthatha ngaphezulu kwemizamo embalwa kwaye ukugqiba iinjongo zibe yingcinga engenakufikeleleka, ke kuya kufuneka urhawuze ingqondo yakho ngeyona ndlela ikrelekrele yokufezekisa iinjongo zenqanaba., kwinani elincinci lamanyathelo.
Kanjalo, umngeni olungileyo linqanaba 829 kwaye indlela yokusebenzisa ingqondo yakho kunye nokusebenza ngobuchule kukusebenzisa i Inqanaba leCandy Crush 829 cheats kunye neengcebiso.
Kubalulekile ukugqiba le nqanaba leenjongo zokufudukela kwinqanaba elilandelayo. Iinjongo zenqanaba 829 kukudala 25 iilekese ezinemigca kunye 10 iipipi ezisongelweyo, kwi 40 amanyathelo alinganiselwe. Ngaphandle kwale qiniseka ukuba ufumene umvuzo 100,000 amanqaku ngokunjalo. Oku kunokubonakala ngathi yinto elula ngamagama kodwa umdlali uyazi ukuba zinokuba nzima kangakanani ezi zinto. Kungenxa yoko le nto sikunika Inqanaba leCandy Crush 829 cheats kunye neengcebiso. Kwiminyaka yobukrelekrele ukusebenza ngokukuko yeyona ndlela ilungileyo!
Inqanaba lokutyumza iilekese 829 cheats kunye neengcebiso
Nantsi, iingcebiso ezininzi kunye namaqhinga akhoyo kweli nqanaba. Umhlathi olandelayo ubonakalisa ezo ngcebiso kunye namacebo:
Kuya kufuneka uqale ngeebhombu ezineswekile ukusombulula inqanaba lokutyumka iilekese 829. Unayo 25 amanyathelo okuphelisa ezi bhombu zeelekese. Ngoku, a smart move would defuse these bombs in the middle of the field. The middle would be the ideal place for impactful diffusion. Kungumsebenzi onzima kakhulu ke ngoko akufanele ukhathazeke ngaloo nto.
Yenza iilekese ezikhethekileyo ngakumbi! Iilekese ezinemigca nezisongelweyo zikhethwa ngaphezu kwezinye iilekese. Unokuzalisekisa ezi njongo ngokuzisusa. Emva koko, 4 iilekese zombala ofanayo unokuzenza. Ngapha koko, zinokubunjwa kwindawo ethe tye, nkqo, T, okanye ubume be-L. Umsebenzisi unokhetho lwemilo.
Kanjalo, kufuneka uthathe ingqalelo ekhethekileyo ekuhambiseni ukujoyina iilekese ezantsi. Iilekese zikholisa ukuhamba ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Iilekese zommandla ongezantsi zingenza i-chain reaction. Iya kuba nefuthe ngakumbi.
Ikrashi yakhendi 1532
Candy Crush Level 410 Cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 419 Cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 1442 Cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 500 cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 437 cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 136 cheats kunye neengcebiso
Ikrashi yakhendi 4001
Ikrashi yakhendi 1879
Ikrashi yakhendi 1642
I-Candy Crush yesaga mod apk
Candy Crush Level 3914 cheats kunye neengcebiso
Candy Crush Level 2229 cheats kunye neengcebiso
Inqanaba leCandy Crush 677 cheats kunye neengcebiso